Depụta ụdị ọhụụ nke Chrome 80 yana igbochi ngosi na ndị ọzọ | Site na Linux
Depụta ụdị ọhụụ nke Chrome 80 yana igbochi ngosi na ndị ọzọ
Mbido nke ọhụụ nke Google Chrome 80 ka gosipụtara, nke na-abịa na ndozi maka ụfọdụ nsogbu nchekwa ma na-eweta atụmatụ ọhụrụ dịka imelite akpaka nke ọdịnaya agwakọtara na HTTPS, imezi kuki SameSite, ihu igwe ndị ọrụ dị jụụ maka ọkwa, yana atụmatụ ndị ọzọ maka ndị mmepe.
Chrome 80 na-ewusi nchebe ihe nchọgharị ma bido ịkwụsị kuki saịtị. Maka ndị mmepe, ndị ga-enwerịrị ike ịmara ihe niile dị na ihe nchọgharị ahụ, ọ na-etinyekwa atụmatụ dị iche iche dịka mkpakọ iyi, CSS ka mma, mgbasa ozi zoro ezo na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
1 Kedu ihe ọhụụ na Google Chrome 80
2 Etu esi etinye Google Chrome 80 na Linux?
Kedu ihe ọhụụ na Google Chrome 80
Na ụdị ọhụrụ nke Google Chrome 80, ihe nchọgharị ahụ na-elekọta na-akpaghị aka na-emelite ihe ọdịyo na vidiyo dị iche iche Saịtị HTTPS site na ideghari URL na HTTPS na-agbanyeghị na HTTP. Ma oburu na ha etinyeghi ya na HTTPS, Chrome na-egbochi ha na ndabara, ma e wezụga onyonyo agwakọtara nke a ka nwere ike ibugo, mana Chrome ga-ede peeji ahụ dị ka "enweghị nchekwa" na omnibox.
Ọ bụ ezie maka ụdị nke Chrome 81 na-esote (nke a ga-ewepụta na Eprel) Google kwuru na onyonyo agwakọtara ga-emelite na HTTPS na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ejighị ha n'elu HTTPS, Chrome ga-egbochi ha na ndabara. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke Google bụ iji hụ na ibe HTTPS na ihe nchọgharị Chrome ya, nke ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ jiri, nwere ike ibu naanị obere akụ HTTPS.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara ìhè na mwepụta a bụ the SameSit àgwàe (nke ewebata na Chrome 51) iji nye saịtị ohere ikwusa ma kuki ga-ejedebe na gburugburu otu saịtị ahụ, na-enwe olileanya na nke a ga-ebelata arịrịọ arịrịọ na saịtị.
Chrome 80 na-eji sistemu ọkwa kuki ọhụrụ echekwara nke ọma, nke ga-emeso kuki na-enweghị ọkwa SameSite kwupụtara. Nchebe ga-adị na ọnọdụ ndị ọzọ ma ọ ga-enwerịrị ike ịnweta site na njikọ echekwara, dịka Chrome 80 ga-ewepụ omume oge dakọtara na azụ.
Ọ na-apụtakwa na site na nke a nke Chrome 80, Google na-agba mbọ ime arịrịọ ikike a na-arịọghị ka ọ ghara iwe iwe.
Chrome 80 ga-egosi mgbe ụfọdụ ngosi ngosi were were nwayo. Ndị na-eme nchọgharị nwere ike iji aka ha họrọ interface ọhụrụ. Google na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka n'okpuru ọnọdụ abụọ: maka ndị ọrụ na-egbochikarị ikike ikike nkwupụta, yana na saịtị ebe ọnụọgụ nnabata dị obere.
Rịba ama na interface ndị ọrụ "dị jụụ" dị na kọmputa desktọọpụ na ekwentị. Google na-ezubekwa ịgbalite usoro ndị ọzọ na-esote afọ a iji lụso "weebụsaịtị ọjọọ na-eji ọkwa weebụ maka mgbasa ozi, nzube ọjọọ ma ọ bụ nke aghụghọ."
Nke a bara uru n'ihi na importScripts () na-eme ihe ederede na etiti ụwa, nke nwere ike ibute nsogbu aha na nsogbu ndị metụtara ya, ma gbochie Onye Ọrụ ahụ ka ọ na-agba ọsọ mgbe ọ na-eweghachite ma nyochaa edemede ịbubata.
Etu esi etinye Google Chrome 80 na Linux?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Depụta ụdị ọhụụ nke Chrome 80 yana igbochi ngosi na ndị ọzọ
Edebelarị beta ụdị nke Lightworks 2020.1 nke na-abịa na mgbanwe ndị a